Recipe Shortbread cookie ene pear
Indlu yasekhaya Recipes Desserts Ikhukhi
I-coat ye-Oatmeal kunye neepereyi Kwiminyaka yokuzalwa yamakhukhi ama-oatmeal ayebizwa ngokuba yi-horse happiness. Eneneni, loo maqebelengwane omnyama anomnyama omnyama athengiswa kwisitolo, unokukholisa kuphela amahashe, ngakumbi ukuba kukho into ekuthelekisayo. Sinawo-asithengi iidyayi kunye neesekese kwisitoreji, kodwa sizilungiselela thina. Umzekelo wale nto i-coat oatmeal eneepereyi, ezifunwa ngabantwana nakubantu abadala, nangona abo bangadli i-oatmeal nayiphi na ifomu. I-crispy evela ngaphandle kwaye iyanqabile kwaye ikhuni ngaphakathi. Ulwimi olunjalo lwecookie aluguquleli ukubiza injabulo yehashe, kungakhathaliseki ukuba ungazixhatshazwa njani kwezi zilwanyana. I-recipe ye-coat oatmeal neepereyi ikuvumela ukuba ubonise ingcinga kunye naso sonke ixesha ukupheka ama-pastries amnandi ngokumnandi. Ngokomzekelo, kwintlama ungafaka i-cocoa powder okanye i-tsholeti egayiweyo, izithelo zomvini okanye izithelo ezomileyo eziqingqiweyo, iinantambo okanye imbewu, kunye nomgubo wokutya okutshintshwayo utshintshwa ngqolowa okanye i-oatmeal. Ukuba ufuna isakhiwo esithe xaxa, nqakra i-oatmeal kwi-grinder. Njengoko ubona, kukho iindlela ezininzi. Kwaye into ebumnandi kukuba ukupheka okunjalo kuthatha ixesha elithile, kwaye kuzisa unonwabo ngakumbi kunokuba kuthengwe kwivenkile.
I-oat flakes 1 tbsp.
Ukhula lwamafama 1.5 tbsp.
Ibhota 50 g
Pear 0.5 iipcs.
Inyathelo 1 Ukulungiselela ii-cookie, thabatha umgubo we-corn, i-oat flakes, ibhotile kwindawo yokushisa kweqanda, iqanda, ipeyari, iswekile kunye nomgubo wengqolowa.
Inyathelo 2 Xhuma ibhotela, iswekile, isoda kunye netyuwa.
Inyathelo 3 Yenza yonke into ngobunzima obufanayo.
Inyathelo 4 I-Peel le pear uze uthathe iikhabhi.
Inyathelo lesi-5 Emva koko fake ipeyari kwiifatata ezidibeneyo, ungeze iipunipoli zamanzi 1-2 - imizuzu emi-3-5 phezu kobushushu obuphakathi.
Inyathelo 6 Hlanganisa iswekile kunye neqanda leoli, amaqabunga, umgubo wengqolowa kunye nepey pear.
Inyathelo 7 Hlanganisa yonke into kakuhle. Ukuba iibhola azikwazi ukubunjwa kwintlama, uze uqalise ukungenisa umgubo wengqolowa ekuhambeni kwenhlama ukuze isetyenziswe ukwenza ama-biscuits (oku malunga ne-0.5-1 yekhofu yomgubo).
Isinyathelo 8 Vala iphepha lokubhaka ngephepha lesikhumba kunye nezandla ukwenza ama-biscuits, sasaza iibisiki 1-2 cm.
Isinyathelo 9 Bhaka kwi-oven ye-190 ° C ukuya kwi-10-15 imizuzu phambi kombala wegolide obunzima.
Ikhukhi kunye ne-chips chips
I-coat ye-Oatmeal kunye nekhofi kunye necolethi
I-Cookie yoSuku lweValentine kunye nokuzaliswa kwe-cherry
Yintoni ekhuthaza abantu?
Yintoni elindele iCarcer ngo-2014
I-meat minced with rice e-oven
Iingcebiso kubazali kwimpilo
Ukugqithiswa komzimba ngexesha lokubeletha
Cannelloni kunye nama-mushroom e-porcini kwi-sauce ishizi